Oromoo Sauwd Arabiyaa jiranf dirmachuu qaba.
Erga Guyaa hara Sauwd Irra nu qaqabe, Kaleessa nami 10,000 hirira ba'uutiin wal qabatee Polisoon Sauwd gara jabinan uumataa hirira bayee tuman gara nannoo namoon biyya ala jirtanti deebsan. Sana booda nannoo sun marsudha polise fi humna warrana itti boobasun dhiirraa hunda erga reeban booda gara hidhati darban .Reebicha fi rassasan lubun namoota 39 kan darbee yamuu ta'uu namoon 70 ol mada'aan Hosptala galan jiru. Hosptala tokko qoofa keessa dubartoon 40 dirqisfama gudeedan yaalama jiru, dubartiin tokko amoo rooron itti hamanan halkan edda kana of faniftee dutee jirti. Hara ganama amoo dubartoota 6, 000 qabani mana hidha sinsisan jiru. Namii biyya ala hundi lubuuf sodatan hoji isaan dhaban jiru, ijoolee mana barumsa dhisan jiru. Nannoo nami biyya ala jiratu galuuf ba'uun rakkoo ta'ee jira. Gabassa Jamal Oromiyya nu ergedha.
Siirni Abba Hiree wayyane lafa keenya biyya Arabati gurgure erga xumure booda amoo Shamaran keenya biyya Arabati gurgura jira. Keessatu Gara Sauwd Arabiyati ji’aa tokko keessa hanga 50,000 gurguramuuf deemu. Guyya guyyan qalaman ajeefama jiru, Reebichuu fi abdan gubun yaakka Arabi guyya guyyan irrati dalagu dha. Warii achi deeman rakkon isaan irra ga’uu gadisa akka ta’ee hundi keenya iyuu arga jira. Kessatu giduu kana Polisoon fi uumati Araba lammi biyya alati dhufan akka Ethiopia mana isaani seenuun samaa jiru, “Haraka qula dhuftan haraka qulaa galuu qabduu” jeechun waan isaa mana keessa qaban hunda samaa jiru. Kana caalaa waan nama gadisu amoo “Abba mana harka fi mila hidhani ija isaa durati hadha mana dirqisan gudeeda” akka jiran dhamacha jiru wari Sauwd jira. Namoon samichi fi hidhan irra ga’aa jiru kun namoota hunda kan waraqa jireenya qaban ilee dabalateeti, saakataiins goodhama jirun seera fi heeran utuu hin tanee abba barbadeetu nama biyya ala mana isaaa deemee samaa akka jiru ilee jiratoon Sauwd ibsan jiru.
Yeero Ama kana Sauwd Arabiya keessati yoo xinatee guyyati nama 6 du'aa jiru kessa, harki 75% Oromoo yamuu ta'uu Haawwasi fi Diasporan Oromoo caalisuun nama Gadisisa; Oggannooti Hawwassa fi Jarsoli fi Abbaooti amanta du'aa Oromoo irra ga'aa jiru akka nama hin dhageenye caalisuun siir miti. Mani Paltak Oromoo Ogannota Qabsoo fi Beektoota Oromoo irrati Olola adeemsisuu malee gaafa Oromoo irra rakkon ga'uu iyyachuu dadhabun badi gudha. Oromoo adunya irra jiru Sauwd Embassy irrati hirira ba'uu qaba. Embassyn Ethiopia lammii Sauwd jiru akka biyyati deebsuu gafachuu qabna. Daqiqa ama kana keessati Namoon Sauwd Hirira irra jiran 50 ol bala gudan irra ga'ee jira. Biyii horma lamii isaa biyyati deebsa jira, Yemen Autobsi 200 Sauwdti ergun lammi ishee bafacha jirti, Filiphinsf biyyon Asia ilee Dooni gurguda ergan lamii isaan bafacha jiru. Oromoo Abba dhabee jira. Ethiopia Sauwd jiru keessa harki 80 oromoo ta'aa jeedhama. Mani Paltaki ilee dhimma kana irrati dubachuun iyyachuu dadhabee, Mazijidi fi Churchin hundi caalisee jira kun ta'uu hin qabu. Mootumman Ethiopia fi Ministeri dhimmaa alaa Ethiopia lammi Sauwd jira akka atataman biyyati deebsan gaafachaa kun ta’uu bana garuu ummani Ethiopia Lammi Araba biyya Etthiopa keessa jiran irrati tarkanfi gosa hunda akka fudhatan goochuun dirqama ta’uu isaa akkeekachisuun qaba.
Lammi keenya dirmachu qabna.